Duulaankii Ciraaq :Isku day lagu maxkamadayn lahaa Blair oo guuldarraystay - BBC News Somali
Duulaankii Ciraaq :Isku day lagu maxkamadayn lahaa Blair oo guuldarraystay
Image caption Tony Blair Ra'isulwasaarihii hore ee Britain
Dacwadda waxaa Blair ku wada nin horey u ahaan jirey jeneraal ka tirsan ciidamada Ciraaq oo lagu magacaabo Jeneraal Cabduwaaxid Shanaan Al Rabaat, isaga oo Blair ku eedeeyey in uu galay dambi weyn oo ah ku duulitaankii dalka Ciraaq sanadii 2003-dii.
Dadka dacwadda lagu furey Blair oo kaliya ma ahan, ee sidoo kale waxaa weheliya xoghayihii hore ee arrimaha dibada Britain Jack Straw iyo waliba xeer illaaliyihii guud ee dalkaasi Jeneraal Lord Goldsmith.
Sanadkii hore maxkamad kale ayaa sidan oo kale Jeneraal Cabduwaaxid oga diidey in uu dacwad ku furo Blair iyo dadka kale.
Xaakimiinta maxkamadda sare ee kala ah Lord Thomas iyo Justice Ouseley ayaa sheegey in aysan muuqanin wax rajo ah oo ku saabsan in dacwadani guuleysan karto, sidaasi darteedna ay daaqada oga saareen.
Dowladda Ciraaq oo u dabaaldagaysa guusha Mosul
Obama: Trump ma hogaamin karo US
Waxay sheegeen in sharciga Britain uusan ka mid ahayn dambi lagu magacaabo 'duullaan' ama ciqaab lagu muteysan karo in dal kale lagu duulo, sidaasi darteedna uu baarlamaanka kaliya qodobkaasi kusoo dari karo sharciga ka hor inta aysan maxkamadaha dhagaysanin dacwad la xiriirta dambiga lagu heysto Blair oo kale.
Britain ayaa waxa ay ka mid ahayd dalalkii duullaanka ku qaaday dalka Ciraaq, kadibna xukunka ka tuurey madaxweynihii dalkaasi Saadaam Xuseen, oo markii dambe xukun dil ah lagu fulin doono. Xiligaasi waxaa Britain ra'isulwasaare ka ahaa Tony Blair.
Sababihii loo cuskaday duulaanka ayaa waxaa ka mid ahaa in Ciraaq ay heysato hubka wax gumaada, hubkaasi oo markii dambe ee laga waayay Ciraaq. Maxkamadda sare ee dalka Britain ayaa is-hortaagtay dacwad lagu soo oogi lahaa Ra'isulwasaarihii hore ee dalkaasi Tony Blair, kaalintii uu ku lahaa duulaankii lagu qaaday dalka Ciraaq awgiis.